Stoke City oo danaynaysa Nani - BBC Somali
Image caption Nani ugu yaraan labo kooxood ayaa la sheegay in ay danaynayaan
Tababare ku xigeenka kooxda Stoke City, Mark Bowen ayaa xaqiijiyay in kooxdiisu ay danaynayso iibsashada Nani oo baalaha uga dheeli jiray kooxda Manchester United.
29 jirka reer boortaqiis ayaa lagu wadaa in uu arbacada u safto qarankiisa marka ay magaalada Lyon foodka isku daraan Wales.
Garoonka Old Trafford wuxuu ka tagay July 2015-kii isaga oo ku biiray kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga ka dhisan oo 4.25 milyan oo gini ku iibsatay qandaraas saddex sano ah, laakiin hadda wuxuu haystaa fursad uu mar kale uga ciyaari karo horyaalka ingiriiska.
Bowen ayaa idaacadda BBC-da u sheegay in Nani uu durba ka tagay horyaalka Ingiriiska, wuxuu intaas ku daray in uu wali xirfad leeyahay uuna wakhti fiican la qaatay kooxda Manchester United oo uu horyaalka Yurub la qaaday.
Nani 40 gool ayuu u dhaliyay Manchester United oo uu u saftay 229 ciyaarood, wuxuuna 2007 kaga soo biiray kooxda Sporting Lisbon.
Man United intii uu la joogay wuxuu la qaday 4 koob oo horyaalka Ingiriiska ah, 2008 wuxuu kula guulaystay koobka horyaalka Yurub ama Champions League.
Kooxda Valencia ayaa sidoo kale loo malaynayaa in ay danaynayso ciyaaryahankaas uu sanad ka hor iibiyay Louis Van Gaal.
Stoke oo kulan kooda u horeeya ee xilli ciyaareedkan la leh Middlesbrough 13 August, xilli ciyaareed koodii hore waxay ku dhameeyeen kaallinta sagaalaad.